Waa maxay fasaxii kaniisada 14-kii October, 2016? Calaamadaha aan la sameyn karin, salaada, hambalyo leh Daboolka
Waa maxay fasaxii kaniisada 14-kii October, 2016? - Ilaalinta Laxaliga Lady of Our Lady iyo Ever-Virgin Mary, fasax ah oo aan lahayn analogues in laamaha haray ee diinta Christian. Ilaalinta Qodobka ugu Qodobka Quduuska ah ee Quduuska ah wuxuu u heellan yahay muuqaalka Hooyo Ilaah oo ku tukaday in ay dadka ku foorarsadaan oo ay faafiyaan madaxdooda iyaga oo calaamad u ah shafeecada iyo jacaylka 910. Tan iyo markaas ka dib, Iidbada kaniisadda waxaa lagu sharfay caadooyinka, fiirinta calaamadaha, akhrinta salaadda iyo bixinta mid kale oo hambalyo ah. Maxaa laga qaban karaa oo aan lagu sameyn karin Ilaalinta Maryanka Blessed Virgin Mary hadda!
Waa maxay fasaxii kaniisada 14-kii October, 2016?
Kuwo badan ayaa xasuusta kaniisadda kaniisada 14-kii October, 2016-ka, laakiin dad yar ayaa ogaanaya taariikhdooda. Laakiin dhacdada u adeegta munaasabadda dabaaldegga taariikhdaas waa mid aad u muhiim ah. Sanadkii 910, Constantinople waxaa lagu soo weeraray weerar kale oo barbar dhac ah. Dadka cabsida leh ayaa diyaar u ah subaxnimadii si ay noloshooda ugu soo celiyaan. Wadaaddada magaaladu waxay ku tukadeen si joogta ah, saacadduna 4:00 subaxdii nacasta Andrew ee Constantinople ayaa u muuqday aragtiyihii, iyagoo ku socda hawada, Hooyo Ilaah. Sida ay nacasku u muujiyeen nacasnimadii quduuska ahayd, Hooyo Ilaah ayaa ka soocay garbaheedii weynaa weyn oo aad u weyn waxayna ku faafisay madaxdii dadka tukanayay. Mucjiso noocan oo kale ah ayaa difaacay Constantinople oo ka yimid ciidamo badan oo barbariyayaal ah, iyagoo kala firdhiyey maraakiibta waawayn ee jihooyinka kala duwan. Cilmi-baaris ahaan xaqiiqada dhabta ah ee badbaadada mucjiso waa wax aan macquul ahayn. Laakiin waxaa jira xogta taariikhiga ah ee ku filan oo xaqiijinaysa xaqiiqada waxa dhacay wakhtigaas: weerarka iyo baxsad qariib ah oo ka yimaada ciidamada cadowga. Ogaanshaha fasaxa 14-ka Oktoobar iyo sida ay ujeedadiisu tahay, waxaanu ilaalin karnaa caadooyinka iyo dhaqamada, dhageyna calaamadaha, u hambalyeynayaa dadkeena.
Maxay noqon kartaa oo aan lagu sameyn karin fasax kaniisadda 14-ka Oktoobar, 2016?
Maxaa laga qaban karaa oo aan lagu sameyn karin fasax kaniisadda 14-ka Oktoobar, 2016, waa inuu ogaadaa Orthodox Christian kasta. Awowyaashayadu waxay ilaalinayaan Qodobka ugu Qodobka Quduuska ah ee Quduuska ah waxay soo afjareen warkooda iyo isu diyaarinta aroosyada ku imanaya Qodobka ugu horreeya ee Immaculate bisha Agoosto 28. Waqtigaan, goosashada waa in si buuxda loo soo ururiyo, iyo beeraha - nadiifiyaa. Marka loo eego caqiidooyinka, fasaxa shahaadada waxay u baahan tahay inay ku raaxeystaan, martiqaadaan martida guriga ama booqdaan qaraabada iyo asxaabta. "Ku riyaaq riwaayad - waxaad arki doontaa aroos wanaagsan!" Caadiyan caan ah 14ka Oktoobar waa in la dubo canjeelada iyo barbaraha. Haddii ugu horeysay ee loo arko ujeedo dhidid ah, ka labaadna waxaa loo qaaday si "dabaysha qaboojinta, aysan ka soo dhexqaadin kuleylka guriga." Sidoo kale Pokrov waxaa lagu aqbalaa dhammaan qoyska saaxiibtinimo si ay u soo booqdaan macbudka, si ay u bixiyaan salaadda Hooyo Ilaah. Waxyaabaha kale ee jira, waxaa jira waxyaabo aan si caddaalad ah loogu sameyn karin Badbaadinta Qaadashada Qodobka ugu Qatarsan ee Quduuska ah. Tusaale ahaan, fasax weyn oo kaniisad ah waxaa laga mamnuucay in uu sameeyo hawl culus ama shaqo dhaqaale. Sidoo kale Pokrov, wax dhib ah kuma lahan luqada khaldan, oo la dagaallamaysa dadka, kufsiga khamriga. Waxaa la aaminsan yahay in maalintaa oo kale wax ballan ah oo ku habboon amaah ama lacag diidmo ah. Gabar garsooreyaashu u qaadatey ilaalinta Maryada Blessed Virgin Mary ayaa ku noolaan doonta muddo 3 sano ah.
Calaamadaha dadka ee fasax kaniisadda 14-kii October, 2016?
Jiilka waayeelka ah ayaa waligiis raacay taxane ah rabitaanka dadka ee leh daryeel gaar ah 14-ka Oktoobar, 2016. Tan iyo fasaxii kaniisadda ayaa dhacaya inta u dhaxaysa dayrta iyo jiilaalka, calaamadaha badani waxay saadaaliyaan inta ay ku suganyihiin roobka iyo barafka, sida ay u adag tahay in uu dhaxan noqdo, iwm. Ka taxadar calaamadaha dadka soo socda ee loogu talagalay iidada kaniisadda 14-kii Oktoobar, 2016:
Haddii ka hor intaanan ku dhicin jahwareerka iyo geedaha oo dhoobo oo dhan dhali, sannadku wuxuu noqonayaa mid aan danaynayn. Haddii caleemuhu ay ku jiraan geedaha, sug sugaanta jiilaalka adag;
Haddii barafka ugu horeeya uu ku dhaco ka hor Shafeecada, jiilaalka ma noqon doono ugu dhakhsaha badan;
Furaha duuliyeyaasha duulimaadka ah ee Pokrov ayaa soo tebiya wararka horey iyo kuwo daran;
Maxay noqon doontaa cimilada Badbaadinta Qodobka ugu Qodobka Quduuska ah, tani waxay noqon doontaa xilliga qaboobaha;
Xaggee bay ka imanaysaa dabaysha dalxiiska, ka dibna sug, oo dhirta ugu horreysa;
Inta badan dusha sare ee barafka, aroosyada sanadka soo socda;
Qasab ma aha inaad guri u diido shafeecada - waad xakameyn doontaa dhammaan jiilaalka;
Carruurtan oo dhan sanadka oo dhan ma xanuunsan, ku shub marin biyo leh shaandho.
Waxaa jira calaamadaha dadka kale ee loogu talagalay fasaxii kaniisadda 14-kii Oktoobar, 2016. Laakiin kor ku xusan ayaa loo tixgeliyaa kuwa ugu caansan oo lagu kalsoonaan karo.
Salaadda Quduuska ah ee loogu talagalay fasaxa kaniisadda 14-ka Oktoobar, 2016 ee Ilaalinta Kaniisadda Quduuska ah
Maalinta Ilaalinta Qodobka ugu Qodobka Quduuska ah ee Quduuska ah, waxaa lagu talinayaa in laga hadlo Quduuska ah salaadda wanaagsan iyo codsiyada salaadda ee yaryar ee badbaadinta iyo gargaarka. Waxaa la aaminsan yahay in dhammaan dadka ka codsaday Hooyo Ilaah fasaxan inay hubaal tahay in la arko oo la maqlo. Akhriso salaadda quduuska ah ee fasaxa kaniisadda 14-ka Oktoobar, 2016-ka, Hooyo Quduuska ah ee ugu caansan ee Illaaha ah ayaa ku dhuumanaya oo ku ilaalinaya ilxadeeda.
Salaan qurux badan oo leh fasax kaniisadda 14-ka Oktoobar, 2016-ka ilaalinta Kaniisadda Quduuska ah
Ilaalinta Qodobka ugu Qodobka Quduuska ah ee Quduuska ah waa maalin caan ah oo iftiin leh taariikhda weyn ee taariikhiga ah. Sannado badan ka hor maalintaas kumanaan qof ayaa heley badbaado iyagoo ku tukanaya Hooyo Ilaah. Naxariisto adiga iyo qoyskaaga oo la socdaan weelka, ha hooyada Ilaahay ka ilaaliso cudurada, sifiican iyo murugo sanadka soo socda. U diyaargaraw dadka qaaliga ah ee quruxda badan ee dabaaldega 14-ka Oktoobar, 2016-ka kaniisada kaniisada, iyaga xasuusiya mar kale jacaylkooda iyo wanaaggooda. Maalinta Marxuumka Dhexdhexaadiyaha ah waxaan rabaa inaan ku farxo farxad. Ku shaqee farxad, si daacad ah, Weligood ha lumin qalbiga. Hooyo Ilaahay ha kaa fogaato jirro iyo niyad xumo. Wax kastaaba waa nijaas, waana xumaan miidhan, oo waxay u ekayd sidii dabayl oo kale.
Muusikada cajiibka ah ee guud ahaaneed ee caalamka, Above dunida waxaa lagu duubay gambaleel. Maalin fasax ah, waxaan idiin hambalyaynayaa, Iyada oo Daboolka Quruxda leh ee Blessed Virgin! Maanta ha ku farxo farxad, Ku buuxi nolosha kulaylka. Hooyo Ilaah ayaa kugu hoggaamisa nolosha, Jacayl, nabad, rumaysad iyo wanaag!
Dabool - fasax hore oo Ruush ah, Waa maxay qadarin mudo dheer! Wuxuu ku dhaqmaa iftiinka dhaqameedyada kala duwan, Waxaan u qalanay inaan fulino. Iyada ayaan kuu hambalyeynayaa, waxaan rabaa inaan ku raaxaysto nasiib wacan, Si aad u jeceshahay oo aad u rumaysatid, ma garanaysid dhibaatooyinka, oo ha lumin rumaysadka Ilaah!
Waxaan rabaa saaxiib ah Pokrov, waxaad dhahdaa erayo badan oo wanaagsan. Noqo mid qurux badan - sidaas oo kale sidan oo kale, Ku faraxsani hadda! Ku dadaal inaad ku guulaysato, Ha ka baqin wax nolosha ah! Oo ha u tukato Hooyo Ilaah - Waxay bedeli doontaa noloshaada! Hadda waxaad ogtahay waxa xaflad weyn oo kaniisada loo dabaaldegayo 14-ka Oktoobar, 2016-ka taariikhda qoto dheer. Baro dhaqamada of Ilaalinta Maryan Blessed Virgin, caadooyinka, calaamadaha iyo salaadda si ay u qaataan maalintan si qumman. Xasuusnow, waxaa jira waxyaabo muhiim ah oo aad u baahan tahay oo aanad ka qaban karin daboolka!
Saacado xiiso leh oo loogu talagalay Maalinta Cosmonautics - loogu talagalay ardayda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fasal - Fikradaha ku saabsan saacada fasalka loogu talagalay Maalinta Cosmonautics oo leh bandhig loogu talagalay 9, 10, 11 fasalka
Sawirro jilicsan oo leh Maalinta Astronautics. Xulasho qosol ah oo ku saabsan Maalinta Cosmonautics ee sawirrada carruurta iyo dadka waaweyn
Ciyaaraha iyo tartamayaasha loogu talagalay sannadka cusub ee sannadka 2018 ee shaqada: funny iyo funny
Super-Test: Maxay kuu keeni doonaan Sannadka Jirka Cagaaran-2018
Raaxeysi 1da Abriil saaxiibada iyo iskuulada iskuulka, asxaabtaada shaqada iyo waalidiinta guriga
Sawirada ugu wanaagsan ee la cafiyo Axad, 2018: ku hambalyeyn, qoraallo iyo gabayo
Sawirrada daaqadaha oo gacmahaaga u ah Sannadka Cusub ee 2018: Sawirrada, templates iyo sawirada qaababka
Noocyada shaqeynta iyo isdhexgalka kaabaha bidix iyo saxda ah ee maskaxda
Quraacda quraacda, cilladaha
Daaweynta dhirta: Daaweynta Crohn
Sidee loo fahmaa in qofka dhalinyarada ah uu kuugu kalsoon yahay
Daryeelka timaha kadib dhalmada
Dhamaan shukumaanada waraaqaha
Macnayaasha noocyada xayawaanka
Konstantin Ernst: Xaqiiqooyin xiiso leh nolosha
Dhar khaas ah oo loogu talagalay carruurta
Waalidiinta inay xusuusiyaan: sida loo koriyo ilmo farxad leh
Tobankii wiil ee ugu quruxda badan aduunka ee 2011
Evelina Bledans ayaa warbixin ka bixisay furitaankeeda, video
Boqoshaada la soo gooyey
Tilmaamaha darfaha gabar
Apple cocktail leh fersken
Xeerarka habdhaqanka iyo xeerarka dabeecadda ee miiska
Dadka Lasagna ah
Baastada leh chard, yaanyada iyo farmaajada